Uday Chopra “ Waxaa Ila Wanaagsan In India Laga Sharciyeeyo Marijuana (Geed Drugs Ah) Waa Qeyb Kamida Dhaqanka” – Filimside.net
Uday Chopra “ Waxaa Ila Wanaagsan In India Laga Sharciyeeyo Marijuana (Geed Drugs Ah) Waa Qeyb Kamida Dhaqanka”
Marijuana (Cannabis) waa geed dhireed oo maandooriyo ah sido kalena loo isticmaalo daawooyinka iyo waxyaabaha caafimaadka la xariira mararka qaar waxaa kaloo loo isticmaala waxyaabaha la xariira Sigaarka.
Jilaaga caanka ah Uday Chopra ayaa baraha bulshada kusoo qoray in laga hirgaliyo dalka India geedkan isticmaalkisa si sharci ah kadibna laga ganacsado si macaash waali ah looga helo.
Waxuu baraha bulshada soo dhigay qoraalkan,”waxaa ila wanaagsan in Marijuana laga hirgaliyo sharci ahaan dalkeen sababto ah waa geed kamid ah dhaqankeena soo jireenka ah sido kalena laga ganacsado si dowlada u canshuurto faaido badan ayaana laga hela.”
“Malahi waa geed wanaagsan boqolkiiba boqol balse dhanka min daawaadka xitaa waa loo isticmaala anigase ma isticmaalo fikir ahaan waxaan qabaa in laga ganacsado si daqli badan looga helo.”
Uday oo ah had iyo jeer mid taageerayaashisa Twitter-ka kula falgala ayaa qoraalka daraad soo dhigay bartiisa dadka qaar ayaa ku raaceen fikir ahaan halka kuwa kalena ka diideen.
Dhanka shaqada jilaagan jir ahaan wuu isku dhex dhacay sanadkii hore balse hader dib u habeen ayuu isku sameenaya jir dhis iyo jimicsi weyn ayuu ku guda jiraa si uu kaga qeyb qaato sameenta filmka Dhoom 4.
Waxaa Aqrisay 744